Tourlọ Ọrụ Njem Nleta nke Africa na-akwalite nkwalite njem njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Tourlọ Ọrụ Njem Nleta nke Africa na-akwalite nkwalite njem njem
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
onye isi oche nke Tanzania na nigeria dr benson bana
Na-achọ ịkwalite Africa dị ka ebe njem nleta nke nhọrọ na ụwa, ndị Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) na-arụkọ ọrụ ọnụ na South Africa, Tanzania, na Nigeria iji kwalite, ịzụ ahịa, na ịzụlite njem nleta na njem ndị njem ndị a n'Africa.
Onye nnochite anya njem nleta na-ahụ maka njem nlegharị anya na Naịjirịa bụ Abigail Olagbaye zutere ma nwee mkparịta ụka n'etiti ya na ndị kọmishọna ukwu na ndị nnọchi anya gọọmentị Nigeria na Tanzania na njem pụrụ iche iji kwalite njem n'etiti Nigeria na West Africa na Tanzania na East Africa.
Ha na onye isi oche nke ATB, Maazị Cuthbert Ncube, Oriakụ Abigail gara leta wee tụgharịa uche na Kọmịshọna Naịjirịa na Tanzania, Dr. Sahabi Isa Gada, yana ndị isi na ndị nnọchi anya gọọmentị na South Africa High Commission na Tanzania.
Ndị isi ụlọ ọrụ ATB abụọ ahụ nwere mkparịta ụka dabere na mmepe njem n'etiti South Africa, Tanzania, Nigeria, na Africa ndị ọzọ.
Onye isi oche ATB na onye nnọchi anya gọọmentị na Nigeria nọ na Tanzania n'ọnwa gara aga maka ịgagharị njem nke dọtakwara ATB Chief Executive Officer (CEO) Doris Woerfel.
N'ụbọchị Tuzdee nke izu a, Oriakụ Abigail gara nleta na High Tanzanian High Commission na Nigeria wee nwee mkparịta ụka dị elu na Dr. Benson Bana, onye isi oche ọhụrụ nke Tanzania na Nigeria, yana Mr. Elias Nwandobo, na Ndụmọdụ n’Ozi ahụ.
Onye nnochite anya ATB na Nigeria sooro ndị nnọchi anya Tanzanian kwurịtara banyere nkwalite na ịkwalite ngwaahịa ndị njem maka njem nleta nke Nigeria na Tanzania.
Akụkụ nke atụmatụ ahụ ewepụtara bụ atụmatụ izu ụka njem Tanzania na Nigeria nke 2020. Mba abụọ a dị n'Africa bụ ndị ama ama maka anụ ọhịa, ọdịbendị Africa bara ụba, na ebe nkiri ndị njem nleta.
A ma ama na Tanzania maka safaris nke anụ ọhịa, Ugwu Kilimanjaro, na oke osimiri Indian Ocean na-ekpo ọkụ na Zanzibar. Nigeria bụ mba kachasị ukwuu n'Africa, nwee ọtụtụ ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme. Nigeria bu kwa onye ndu n’Africa, juputara n’omenala Africa, otutu akwukwo Afrika nke ndi Afrika na ere na Europe na North America, na adota otutu ndi oka mmuta ileta mba Africa a maka nzuko mmuta.
A na-atụ anya izu izu njem nke Tanzania na Nigeria ga-adọta ndị ọrụ njegharị, ndị njem na ndị njem, ndị ụgbọ elu, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, ndị nwere oke, ndị na-azụ ahịa, ndị mgbasa ozi, na ndị njem nleta, n'etiti ndị ọzọ metụtara ahịa njem.
Onye isi ulo oru Tanzania High Commission na Nigeria na ndi njem nlere anya ndi njem nlere anya n’Africa nwere olile anya nke oma nchikota nke nmeko a nke oma na ihe oma o na enye mba na Afrika dum.
N'ịbụ onye guzosiri ike n'ọhụụ iji jikọta ma jikọọ Africa dị ka otu ebe, ATB na-achọ ịhụ ndị si Nigeria na South Africa na-eleta nleta na Tanzania na ndị ọbịa Tanzanian, yana ndị si mba ndị ahụ si mba Africa ịga leta mba ndị ọzọ n'Africa.